GoneMAD waa ciyaartoy cod maqal ah oo Android ah | Androidsis
GoneMAD waa ciyaaryahan maqal ah oo ay tahay inaad ogaato; lagu cusbooneysiiyay interface cusub
GoneMAD waa ciyaartoy maqal ah oo aan cusbayn, laakiin dhowr maalmood ka hor waxaa lagu cusboonaysiiyay is dhexgal cusub oo soo jiitay dareenkeenna. Marka waa waqtiga ugu fiican ee la shaacin karo arjigan oo aad u badan tahay inaadan aqoon.
Ya Waxay ku jirtay Play Store muddo 4 sano ah, si labo maalmood ka hor ay u gaarto nooca 3.0 noockeedii ugu dambeeyay ama xasilloon. Fursad xiiso leh oo aan ku baran karno ciyaartoygan aan ugu hayno bixinta dukaanka Android, laakiin iyada oo loo marayo nooc tijaabo ah ayaan ku tijaabin karnaa wanaaggiisa iyo faa'iidooyinkiisa.
1 Interface cusub ee 3.0 iyo waxa cusub
2 Auto DJ iyo mawduuc firfircoon
Interface cusub ee 3.0 iyo waxa cusub
Marka laga reebo interface xiiso leh oo cusub oo ah nooca GoneMAD nooca 3.0Astaamaha cusub sida mawduuca firfircoon, Auto DJ, taageerada heesaha heesaha, iyo waxyaabo kaloo badan ayaa sidoo kale lagu daray.
GoneMAD Music Player wuxuu hadda adeegsanayaa nooca 3.o ee interface cusub ku saleysan Naqshadeynta Maaddada iyo qaar ka mid ah mawduucyada midabka qurux badan; taasi waa in la yiraahdo, iyagu kama tagayaan cidna dan la'aan. Waxaan fursad u leenahay inaan u adeegsano inta udhaxeysa laba mowduuc oo aan ku raaxeysaneyno isla markaana aan u habeyn karno qeyb weyn oo ka mid ah walxaha xiriirka ciyaaryahanka.
Waxaan ka hadalnaa badhannada waxqabadka, darbiyada, farshaxanka albumka, iyo metadata shaashadda lagu soo bandhigi karo ayaa ka mid ah heesaha aan ciyaarno.
Haddaan tirineyno taas oo bixisa habeyn badan sababtoo ah waxaan naqshadeyn karnaa walxaha nafteena sida farshaxanka albamka oo kale si ay geesaha isugu wareegaan ama xitaa qaabka albumku u wareegsan yahay. Xaaladdan oo kale, runtu waxay tahay in GoneMAD uu yahay muusig maqal ah oo aan ahayn wixii aan ku baran jirnay, marka haddii aad rabto inaad siiso taabasho u gaar ah iyo mid gaar ah, waa run in aanu jirin barnaamij la mid ah.
Kuwani waa qaar ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee GoneMAD qaabkeeda 3.0:
Qalabka maqalka ee khaaska ah
Dib u maqal la'aan
Liiska Liiska Ciyaaraha
Android Auto, Chromecast, Taageerada Replaygain
Taageerada heesaha heesaha sida Musixmatch
Auto DJ iyo mawduuc firfircoon
El Mawduuca firfircoon wuxuu ku saabsan yahay GoneMAD qaadashada midabada aasaasiga ah farshaxanka albumka ee heesta ciyaaraysa, waxayna u qaadaysaa qaybaha kala duwan ee is-dhexgalka. Maxaa siinaya dhibic kale si loogu beddelo ciyaartoy in, ka dib 14 maalmood oo tijaabada ah, aan sii wadi karno inaan ku bixino khibradeeda xiisaha leh.
Marka laga reebo ku xisaabtam Musixmatch ereyada, Taasina waxay ka muuqan doontaa ciyaaryahanka sida heesta u dhawaaqeyso (qodob muhiim ah tan), waxay sidoo kale siisaa taageero QuickLyrics.
Waa maxay haa in aan aad buu uga helay waa Auto DJ-kiisa, taasina waxay mas'uul ka tahay in heeso lagu daro safka looxa si aan u ilaawno raadinta heesaha oo aan u yeelno kuwo dhawaaq ah.
Kuwa raadinaya ciyaaryahan cusbooneysiiya farshaxanka albamka heesaha ay ciyaaraan, GoneMAD ayaa ka baaraan internetka iyaga. Waana haddii aan tirinno in dulucdu tahay mid firfircoon, taasi waxay ka wanaagsan tahay in loo xil saaro maslaxaddeeda si ay muuqaal ahaan soo jiidasho leh ugu adeegsato moobiilkeenna.
Haddii kale, GoneMAD wuxuu noqdaa muusig maqal xiiso leh beddelka kuwa kale sida PowerAMP; qaasatan hadaan rabno inaan ciyaarno muusigteena aan ku keydinay microSD-geena ama keydkeena mobilka.
GoneMAD Music Player (Tijaabo)
Furitaanka Ciyaaryahanka Muusikada GoneMAD
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » GoneMAD waa ciyaaryahan maqal ah oo ay tahay inaad ogaato; lagu cusbooneysiiyay interface cusub
Star Wars: Ugaadhsadayaashu waxay imanayaan Android dabayaaqada sanadkan